laambadda | Maan NIDAAMKA ganacsi Forex
Forex laambadda laambadda tilmaame hannaankii xeerarka kala duwan si ay u go'aamiyaan booska uu ka ganacsi ama suuqa Forex entry ,la this laambadda ganacsade Forex isku dari kartaa tilmaamayaasha kale xoojinta go'aaminta boos fiican .
Category Archives: laambadda
TUSAALE GUDAHA BAR SOO GELITAANKA qaabka ( 4 )
ganifx/ June 21, 2017/ laambadda/ 0 comments
Markan waxaan weli in la siiyo tusaale u ah sida meel bannaan by isticmaalka hannaankii gudaha bar in baxday suuqa, laakiin isticmaalaya jir ah waqti yar . Tusaale ahaan hoos ku qoran waxaanu isticmaali doonaa image ku saabsan lacagta euro USD H4 waqti. Sawirka hoose wuxuu muujinayaa laba laambadda koowaad waa bearish iyo candlsetick in…
CONTOH ENRTY POLA GUDAHA BAR ( 3 )
Markan waxaan weli in la siiyo tusaale u ah sida meel bannaan by isticmaalka hannaankii gudaha bar in baxday suuqa, sida tusaale ahaan hoos ku qoran waxaanu isticmaali doonaa image ku CHF USD ku saabsan qaab dhismeedka waqti D1. Sawirka hoose wuxuu muujinayaa laba laambadda taas oo candlsetick fiican koowaad iyo labaad waa laambad bearish. Haddii aynu eegno laambadda…
TUSAALE GUDAHA BAR SOO GELITAANKA qaabka ( 2 )
Markan waxaan weli in la siiyo tusaale u ah sida meel bannaan by isticmaalka hannaankii gudaha bar in baxday suuqa, sida tusaale ahaan hoos ku qoran waxaanu isticmaali doonaa image ku USD iibiyey lacag on jir waqti D1. Sawirka hoose wuxuu muujinayaa laba laambadda koowaad waa candlsetick bearish iyo labaad waa laambad fiican. Haddii aynu eegno laambadda…
TUSAALE GUDAHA BAR SOO GELITAANKA qaabka ( 1 )
Markan waxaan ku siin doonaa tusaale u ah sida meel bannaan by isticmaalka hannaankii gudaha bar in baxday suuqa, sida tusaale ahaan hoos ku qoran waxaanu isticmaali doonaa image ku saabsan lacagta euro Jpy on jir waqti D1. Sawirka hoose wuxuu muujinayaa laba laambadda koowaad waa candlsetick bearish iyo labaad waa laambad fiican. Haddii aynu eegno laambadda labaad…
Qaabka BAR GUDAHA Isfahanka
Mid ka mid ah qaababka laambadda in si joogto ah u muuqdaan in suuqa iyo waxaan ka dhigi kartaa sida istaraatijiyad waa Inside Bar. Inside Bar halkan ka dhigan tahay in ay jiraan laba xabbadood oo labaad laambadda laambadda taas oo ah in ka yar sare oo ka mid ah dalamrange hore laambadda. Xaaladdan oo kale annagu ma Oga midabada ama nooca laambadda, may laambadda Halyeey – Bearish , fiican…
BELAJAR POLA laambadda saddex askari WHITE
ganifx/ June 8, 2017/ laambadda/ 0 comments
Markan waxaan ku baran doonaa mid ka mid noqoshada hannaankii ee arrimuhu waxay hoos ugu Taxane la formation of saddex kale oo laambadda. Ka dib markii aan u bartaan nidaamyada Saddex Black ciyin, sidaas oo kalena haatan hannaankii meeshii ilayska in laga wada hadli doonaa waqti ay tani tahay qaab Saddex White Askarta. hannaankii Tan waxaa dhif ah kala kulantay suuqa laakiin markii qaabkani u muuqataa waa ganacsade lulid ah…
BELAJAR POLA laambadda SADDEXAAD diiqu MADOW
Markan waxaan ku baran doonaa mid ka mid noqoshada hannaankii ee arrimuhu kacay inuu u dhaadhaco Taxane la formation of saddex laambadood. hannaankii meeshii ilayska in laga wada hadli doonaa waqti ay tani tahay qaab Saddex Black ciyin. hannaankii Tan waxaa dhif ah kala kulantay suuqa laakiin markaas marka qaabkani u muuqataa in ay tahay run isu bedbeddelaan ganacsade – runtii feejignaadaan la this hannaankii laambadda. Pola Saddex Black ciyin…
SIDA LAGU BADDALAYO retracement Fibonacci
ganifx/ Laga yaabaa 31, 2017/ laambadda, Fibonacci/ 0 comments
In wada hadal kula this falanqaynta laambadda, waxaanu isticmaali doonaa lacagbixinta goob joog ka yihiin retracement Fibonacci. Sida aan wada ogaaday in retracement Fibonacci shaqada this waa in lagu cabbiro sebarapa badan oo la saxo on isbedel. Nah, la Fibonacci this sidoo kale waxaan u falanqeeyaan doono suuqa weheliso -pola nidaamyada laambadda leeyihiin aynu hore u bartay. Munaasabaddan waxaan noqon doonaa wax yar ka beddelid a…
qaabka ARJIGA – hannaankii meeshii ilayska IN Forex
ganifx/ Laga yaabaa 31, 2017/ laambadda/ 0 comments
Waanu ka wada hadalnay nidaamyada laambadda iyo retracement Fibonacci, sidoo kale hadda waxaan isku dayi doonaa inuu iyaga geeyo shaandheynta dhaqdhaqaaqa suuqa. In la soo dhaafay aan hannaankii hadlay – furida wanaagsan ilaa dib qaab ahaan ama hoos. Waayo, ku celis ah, furida hannaankii ee arrimuhu soo baxna in la hoos waxaa astaan ​​u ah ee nidaamyada -pola : Bearish Engulfing, Bearish Harami, Star toogashada, Man laalaadeen , Dark Cloud…
SHARAXA KOOBAN laambadda TERBENTUKNYA
ganifx/ Laga yaabaa 30, 2017/ laambadda/ 0 comments
1. Macaamilada suuqa / suuqa saamiyada ama lacagta waa qiimo dhaca sabab u ah dagaalka u dhexeeya iibsadaha ganacsade ah oo ganacsade iibiyaha. 2. Kororka qiimaha sicirka stock ama lacagta ah oo ka dhacay, aad buu u saameeyay xiiso gadashada ka soo iibsada ganacsatada sida caadiga ah loo yaqaan Bulls. 3. Sida hoos u dhaca qiimaha sicirka saamiyada, saameeyay ka iibiso xiisaha…
Sida loo aqoonsado baahida sahayda
SIDA LOO ISTICMAALO ballaarinta Fibonacci